Tsara ny mihetsika saingy: tsy laharam-pahamehana ny seho ivelany | NewsMada
Famerenana ny Malagasy ho eny an-doharano, hono! Ilaina maika tokoa ny fanatanterahana izany satria tsy hisy raha manjary eto raha tsy resy lahatra ny Malagasy fa Malagasy izy sy ny momba azy. Tsy laharam-pahamehana ny fanaovana izany endrika ivelany fotsiny. Te hoderaina, te hojerena, te hodokafana, te hiavaka… Ka aleo manao malabary, asiana mpikabary ny “fety” atao. Aleo ireo tarika mpanao « gasigasy » no alaina, sns! Raha tsy ireo karazan-toetra mirefarefa amin’ny tany ireo no miala ao amin’ny Malagasy, tsy ho tafiditra ao aminy mihitsy ny maha izy azy.
… Noho izany, mila hampahafantarina ny Malagasy fa manana ny maha izy azy izy ka tsy voatery hitelin-drora manoloana ny kolontsaina sy ny zavakanto ary ny fomba amam-panao avy any ivelany. Io asa goavana io no tsy ampy any anivon’ny tokantrano, eny amin’ny fiarahamonina, sns, hany ka mahazo vahana rehefa mety ho endrika ivelany.
Fa maninona ireo ray aman-dreny no tsy afaka mampiaina sy mampahafantatra ny zanany ny kolontsaina sy ny zavakanto ary ny fomba amam-panao malagasy? Fa maninona ireo raiamandreny no manaiky sy manara-davahana fotsiny amin’ireo fanaovana tsinontsinona ny maha Malagasy?
… Satria ilay endrika ivelany fotsiny no isalorana fa tsy latsaka anaty akory ilay fiainana sy fahafantarana ny maha Malagasy!